best Iforamu yekhompyuter ukusukela ngo-2004
ngaphezulu ...Eyona nto inamandla phpBB XTE 4.3
Fumana iforum yasimahla
Khetha igama leakhawunti (isizinda sakho) kwaye usebenzise idilesi ye-imeyile. Nceda waziswe ukuba igama lakho eliyintloko lokuphatha liza kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile. Asisayi kuze sikuthumelele ogaxekile okanye intengiso. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba i-imeyile kunye nephasiwedi yakho eyintloko yomlawuli inokufumaneka kwifolda yakho yogaxekile.
Iiforamu zisebenza njengengxoxo okanye amaqonga olwazi, zibonelela ubungqina, kwaye zihlala zibonelela ngoncedo lokuqala kwimiba ebalulekileyo, kodwa ukongeza kuzo zonke ezi zinto, zibaluleke kakhulu kwinkcubeko yenethiwekhi. Sithembele nje kumava ethu ekubambeni iiforamu kwaye sigxile kuluntu lwakho, siya kukhathalela ukugcina, ukukhulisa nokuqinisekisa iiforum mahala. Bhalisa eyakho iforum simahla ngoku! Ukususela ngo-2004 sisebenza njengendibano yasimahla yeforam. Apha ufumana eyakho iforum simahla, onokuthi usete kwaye wenze ngokwezifiso ngaphantsi kwemizuzu emi-2. Awudingi naluphi na ulwazi lobugcisa kwaye unokugxila kumxholo kunye namalungu. Awudingi ukukhathazeka malunga ne-backups, iipatches, uhlaziyo, ukhuseleko, njl njl, sikukhathalela yonke into!
Igama leakhawunti [A-z no-0-9]: .webforum.eu
Ngokusekwa kwakho uyayamkela Imigaqo yokuSebenzisa.
Iiforamu zisebenza njengengxoxo okanye amaqonga olwazi, zibonelela ubungqina, kwaye zihlala zibonelela ngoncedo lokuqala kwimiba ebalulekileyo, kodwa ukongeza kuzo zonke ezi zinto, zibaluleke kakhulu kwinkcubeko yenethiwekhi. Sithembele nje kumava ethu ekubambeni iiforamu kwaye sigxile kuluntu lwakho, siya kukhathalela ukugcina, ukukhulisa nokuqinisekisa iiforum mahala. Bhalisa eyakho iforum simahla ngoku! Ukususela ngo-2004 sisebenza njengendibano yasimahla yeforam. Apha ufumana eyakho iforum simahla, onokuthi usete kwaye wenze ngokwezifiso ngaphantsi kwemizuzu emi-2. Awudingi naluphi na ulwazi lobugcisa kwaye unokugxila kumxholo kunye namalungu. Awudingi ukukhathazeka malunga ne-backups, iipatches, uhlaziyo, ukhuseleko, njl njl, sikukhathalela yonke into! Amagama osetyenziso oluvela kugqatso uyasebenza.